WORLD – Page 2 – Daily Som
Dowlada Sacuudiga Oo Goowracday Muwaadin Indonesian ah
By Staff on March 20, 2018 WORLD
Dowlada Sacuudiga ayaa dil ku fulisay Muwaadin udhashay Dalka Indonesia sida ay Xqiijisay Hay’ada migran care lagu magacaabo oo udooda shaqaalaha Indonesia. Nin lagu magacaabo Zaini misrin ayay Qoortra ka jartay Dowlada Sacuudiga ka dib markii ay ku eedeysay in uu dilay Nin uu daral wa u ahaa oo udhashay Sacuudiga. Hay’ada Migrant ayaa sheegtay […]
Dowladaha Maraykanka Iyo Kuuriyada Koofureed Oo wakhti uqabtay Xiliga ay samaynayaan Dhoola tuska
Mraykanka iyo Kuuriyada Koofureed ayaa isku raacay Xiliga la qabanayo Dhoola tuska Militari ee sida wada jirka ah ay usamaynayaan, waxa ayna isku raaceen in ay qabtaan Bisha soo socata Koowdeeda. Waqiyiga KJuuriya ayaa horay ugu soo horjeesatay Dhoola tuska ay samaynayaa Maraykanka iyo Koofurta Kuuriya ayaga oo ku tilmaamay Daan daansi aan aan loo […]
Trump oo ulalaynayo in Toogasho lagu Xukumo Dadka ka ganacsada Daroogada
Madaxwaynaha Dalka Maraykanka Donald Trump ayaa ku baaqay in la dilo dadka ka ganacsado Daroogada, waxa uuna ka mid yahay qorshayaasha marayka ee trump uu kaga Cirib tarayo Daroogada. Trump oo ayaa la sheegay in uu si wayn ugu olaleeynayo qorshahaan isla markaana uu ka sheegay mar uu khudbad ka jeediyay Gobalka New Hampshire oo caan […]
Madaxwaynaha Shiinaha oo uga digay baarlamaanka Dalkaas in ay is Cajabiyaan
Xi Jinping Madaxweynaha Shiinaha ayaa usheegay baarlamaanka dalkaas in ay waajib ku tahay dealkiisa uusan is cajabinin marka uu fiiriyo horumarka Xowlliga ah ee uu sameeyay Sanadahii ugu dambeeyay. Madaxwaynaha oo Khudbad ka jeediyay shirka sannadlaha ah ee baarlamaanka ayuu Xi Jinping u sheegay in Shiinuhu uu marayo marxalad adag marka taariikhdiisa dib loo fiiriyo waxa […]
Ciidamada Turkiga oo kala wareegay YPG Magaalada Afrin
Ciidamada Difaaca dalka tiurkiga oo garab siinaya Ciidamada Xurta ah ee siiriya ayaa la wareegay Magaalada Afrin ee waqooyiga dalka Suuriya. Ciidamada militaiga turkiga ayaa ka saaray kooxda YPG ee uu taageero Marykanka Magaalada Afrin, sida uu sheegay Madaxwaynaha Dalka Turkiga Rajab dayin erdogan. Howlgalkaan oo ahaa mid aan kala joogsi lahayn ayaa waxaa si […]
By Staff on March 11, 2018 WORLD
Madaxwaynaha Dalka Turkiga Rajab Dayib ordogan ayaa ku goodiyay in ay si fayn doonaan Haraadiga waxa uu ugu yeeray Argagaxisada YPG ka dib hadal uu ujeediyay Xisbigiisa. Madaxwayne Ordogan ayaa usheegay xisbigiisa in ay sii socon doonaan dagaalada jirsaday 50 ka maali ee ka socda Gobalka Afrin oo ay qayb ka mid ah ku sugan […]